Tirinta codadka wareegga 1aad ee doorashadda Galmudug oo socota
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta Dhuusamareeb ku dooranaya Madaxweyne cusub, iyadoo xilka ay u tartamayaan 4 musharax oo kaliya.
Doorashadda oo ka dhacaysa hoolka Shiirkole, ayaa waxaa la filayaa inuu kusoo baxo musharaxa dowladda Federaalka ay wadato ee Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], waxaana cod bixinta ka qeybqaadanaya 89 Xildhibaan.
Musharixiin dhowr ah ayaa isaga haray tartanka, kuwaasoo sheegay in dowladda Federaalka ay afduubtay hanaankii doorashadda, islamarkaana ay taageertay mid kamida musharixiinta xilka Madaxweynaha Galmudug.
Waxaa hadda lasoo gaba-gabeeyay wareegga 1aad ee doorashadda, waxaana la filayaa inuu gudiga dooraashadda Galmudug uu ku dhawaaqo natiijadda codeynta.
Madaxweynaha cusub ayaa hogaamin doona Galmudug 4 sano, waxaana horyaallo caqabado badan, oo ay kamid yihiin mideynta maamulkan mudada dheer kala qeybsanaa, xalinta khilaafyada siyaasadeed iyo amniga.
Qalbi-dhagax oo gaarey Dhuusamareeb, loona diiday Cadaado
Soomaliya 09.10.2018. 10:49
Saraakiisha Galmudug ayaa kahor istaagey Qalbi Dhagax inuu booqdo Cadaado oo ay...
Madaxweyne Farmaajo oo Maqaam gaar ah u yeelay Cadaado
Soomaliya 23.01.2018. 13:58
Dowlad goboleedyada oo fahfaahiyey kulankii ay la yeesheen Farmaajo
Soomaliya 20.07.2020. 13:30
Maxaa hortaagan in Madaxda Galmudug ay heshiiyaan? [Dhageyso]
Soomaliya 29.06.2018. 16:57
Shirkii Midowga Galmudug iyo Ahlu Sunna oo dib u dhacay
Soomaliya 17.01.2018. 11:46